We She Me: BPA Free ကလေး နို့ဗူး
Phyo Evergreen - 3/25/09, 11:13 PM
JuneOne - 3/25/09, 11:14 PM
အိမ်မှာတော့ သားကလုံးဝအပူ၊အနွေးမသောက်လို့ ရေကျက်အေးနဲ့ပဲ နို့ကိုပျော်အောင်ဖျော်ရတယ်။မွေးစလောက်ကတည်း ကနို့အနွေးဆိုလုံးဝမသောက်ဘူး။နို့ဘူးကို pigeonသုံးဖြစ်တယ်။
Phyo Evergreen - 3/25/09, 11:16 PM
မှတ်သားသွားတယ်.. ပြန်ပြောလို့ရအောင်.. ပြောပြရမဲ့သူလည်းမရှိ တကယ်တော့..။ ပို့စ်တိုလို့ သိပ်မကျေနပ်ပါ..။
nu-san - 3/26/09, 12:02 AM
ကလေးတွေအတွက်ဆိုတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်မယ့်ဟာဆို ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.. Andy ပြောပြလို့သာ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မှတ်ထားလို့ရတာ.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို ဖတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး.. အင်း.. reference တွေပေါ့ကွယ်.. တချိန်ချိန်ကျရင်တော့ အသုံးတည့်လာမှာပေါ့.. :P
choco thazin - 3/26/09, 1:16 AM
Moe Cho Thinn - 3/26/09, 4:05 AM
အခုလို ရေးပြတော့ အရင်က မသိသေးတာ သိရပြီး ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ ကလေးမိခင် သူငယ်ချင်းတွေဆီ လင့်ခ် ပို့ပေးလိုက်အုံးမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Anonymous - 3/26/09, 12:40 PM
how about pigeon milk bottle?
၀ါဝါ - 3/26/09, 10:48 PM
ကျေးဇူး ကိုအန်ဒီ.. မှတ်ထားအုန်းမှ.. သိပ်မကြာခင်ဝယ်ရတော.မှာဆိုတော. :)
BTW OG က B-Free Plus ဆိုတော. brand ကကော ဘာ brand လဲဟင်?
B-Free Plus ဆိုတာ product name လား brand name
pandora - 3/27/09, 1:35 PM
wesheme က တဆင့် ပန်ဒိုရာမှာ လာဖတ်သူများအတွက် လင့်ခ်ပေးထားတာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီနေရာမှာပဲ ရေးသွားလိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 3/27/09, 10:54 PM
Phillips AVENT still use BPA but they are going to introduceanew bottle made from BPA-free plastic in 2009.
JeweL - 12/12/10, 11:17 AM
ဒီပို့စ် ကို လင့်ချိတ်ထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
(အရင်ခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့ ချိတ်ပြီးသွားမှ လာပြောတာ စိတ်မရှိပါနဲ့.. :D )